American automatique Technology Expo / West Fanasana
ny mpitantana ny 18-06-12
Tamin'ny 5 Febroary amin'ny 7, 2019, ny orinasa no handray anjara ao amin'ny American automatique Teknolojia Expo / West. No misy ny lay amin'ny Anaheim Fifanarahana Center in California. Automatique Technology Expo West no lehibe indrindra Amerika Avaratra famolavolana sy ny orinasa mpamokatra entana nandroso hetsika. Fanehoana ...
ny mpitantana ny 18-06-11
Tamin'ny Novambra 27 ho 29, 2018, ny orinasa no handray anjara ao amin'ny SPS IPC 2018 Namoaka Ireo Nuremberg Electric automatique Exhibition, Alemaina. Booth toerana: Hall 3, 3-414. Amim-pitiavana izahay miarahaba anareo tonga soa hamangy ny trano heva, ary iaraho midinika ny fiaraha-miasa.
CCTV 9 tafatafa sy tatitra ny PROSTEPPER ny mpanorina
ny mpitantana ny 17-11-11
Tamin'ny volana Oktobra 2017, CCTV 9 Discovery ny mpanao asa tanana Mind-Building Group nanadihady ny filming fandaharana "hakingan-tsaina mba Hahatonga Small Motor VS Mitandrema sy ny Miaramila Man", mba hanalana sarona ny tantaran'ny mpanao asa tanana ny Mr. Ding Xuhong, ny mpanorina ny Changzhou Prostepper Co., Ltd . ny sarimihetsika nisafo craftsmans ...
Changzhou PROSTEPPER NO APPROCHING NY tsara kokoa sy MAHOMBY HOAVY
ny mpitantana ny 16-05-30
Tamin'ny May 2016, Changzhou PROSTEPPER CO., LTD. Nifindra tany amin'ny fitsipika fananganana ny fanorenana orinasa ao amin'ny Hutang B2 Siansa sy ny Teknolojia Industrial Park, Changzhou City. Ny fitambaran'ny faritra famokarana nihatra any 10.000 metatra toradroa, mandritra izany, maherin'ny 100 karazana lathe mandeha ho azy, mandeha ho azy milina Fitotoana Vary sy ...